CIA Khabar के इन्टरनेटको लतले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ ? - CIA Khabar
के इन्टरनेटको लतले स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ ?
इन्टरनेट सूचना, मनोरञ्जन र ज्ञानको भण्डार हो । तर सही सदुपयोग गर्न नसके र अत्यधिक प्रयोग गर्न थाले मानिसमा इन्टरनेटको लत नै लाग्दछ ।
अत्यधिक इन्टरनेटको प्रयोगले प्रयोगकर्ताको एकाग्रता, सम्झना शक्ति र सामाजिक सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । इन्टरनेटको प्रयोगले मस्तिष्कको संरचनामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । इन्टरनेटले मष्तिकको संरचना, कार्य गर्ने शैली र संज्ञानात्मक विकासलाई प्रभावित पार्दछ र बिस्तारै मानिस यसको लतमा फस्ने गर्दछन् । अधिकांश अभिभावकमा सन्तानमा भएको इन्टरनेटको लतका कारण चिन्तित छन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा सन् २०१८ मा जारी निर्देश अनुसार, साढे दुई वर्ष भन्दा मुनीका बालबालिकालाई दैनिक एक घण्टा भन्दा बढी इन्टरनेट वा स्क्रिनमा बिताउन दिन नहुने तर्क गरेको छ । यसले बालबालिकालाई बिस्तारै ‘साइबर एडिक्ट’ बनाउने विज्ञको तर्क छ ।
इन्टरनेटको लत रक्सी र चुरोटको कुलत जस्तै हुन्छ । इन्टरनेटको लत लागेकाहरूमा तनाव र निन्द्रा बढ्दै जाने चिकित्सक बताउँछन् । यसका साथै अधैर्य हुने, छटपटाहट, बेचैनी बढ्ने, तनाव र डिप्रेसन पनि बढाउँछ । तसर्थ धेरै समयमा इन्टरनेटमा बिताउनेहरूले समय मै सचेत हुन आवश्यक छ ।
२० चैत्र २०७८, आईतवार १९:३९ प्रकाशित
कफी पिउँदा रोग हैन, मुटु जोगाउँछ
कालीगण्डकी नदीमा गाइड प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम शुरु